Qaar kamid ah Madaxda Warbaahinta oo cabasho u gudbiyay Farmaajo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Qaar kamid ah Madaxda Warbaahinta oo cabasho u gudbiyay Farmaajo
Qaar kamid ah Madaxda Warbaahinta oo cabasho u gudbiyay Farmaajo
Madaxweynaha muddo xileedkiis dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Madaxtooyada Qaranka ku qaabbilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa ugu hambalyeeyey Maalinta Caalamiga ah ee Xorriyadda Saxaafadda.
Madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay mar walba Dowladda Federaalka Soomaaliya uga go’antahay dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyada oo tallaabooyin muuqda loo qaaday dhankaas, taas oo ay tusaale u tahay qiimaynta sannadlaha ah ee ay 2020-ka sameeyeen ururrada u dooda warfidiyeenka oo xaqiijiyay in dalka uu sameeyey horumar dhanka xorriyadda iyo xuquuqda saxaafadda ah.
Farmaajo ayaa tilmaamay in Dowladda ay door muhiim ah siisay horumarinta saxaafadda, iyada oo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda Warbaahinta lana meel mariyey shuruuc iyo xeer ilaaliye u gaar ah saxaafadda si looga hortago tacaddi iyo meel-ka-dhac kasta oo ka dhan ah warbaahinta.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xusay shaqada wanaagsan ee ay Warbaahinta Soomaaliyeed u hayso dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu ammaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaateen dowladda dhiska, wacyi gelinta bulshada.
Madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay ee xalay la kulmay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo ayaa waxaa kamid ahaa Agaasimaha guud ee Warbaahinta Dalsan Mudane Xasan Cali Geessey.
Maqaal horeTaliye Xijaar oo soo saaray Amar ku socda Ciidamada Booliska Dowladda
Maqaal XigaMadaxtooyada oo markii ugu horreeysay ka hadashay dagaaladii Muqdisho